IRhode, Greece - World Tourism Portal
Amawebhusayithi ezokuvakasha asemthethweni eRhodes
Bukela ividiyo emayelana neRhodes
Hlola iRhode isiqhingi se-Knights. I-Rhode isiqhingi esihle kakhulu hhayi kuphela kulabo abafuna ukuphumula kepha futhi nalabo abafuna iholide eligcwele isenzo. Njengoba inamagquma ayo aluhlaza okotshani, izigodi eziluhlaza ezicebile nomugqa ongaphazanyiswa wamabhishi egolide, iRhodes indawo ebusisiwe impela. Faka izindawo ezinhle kakhulu zokuvakasha, inhlanganisela ekhethekile yesiqhingi sendabuko yendabuko nezendabuko, kanye nezindawo eziningi zamasiko nezemivubukulo futhi uthole indawo efanelekile yokuvakasha.
Ngenxa yesikhundla sayo samasu, iRhodes ibilokhu ibalulekile kusukela ezikhathini zasendulo. Ngokushesha yathuthuka yaba enye yezikhungo ezibaluleke kakhulu zokuhambisa olwandle nokuhweba eMpumalanga yeMedithera. Lapho iba yisifundazwe samaRoma, futhi kamuva noMbuso waseByzantine, ekuqaleni yalahlekelwa yinkazimulo yayo yasendulo. Kwi-1309 ama-Knights of Saint John waseJerusalema anqoba iRhode. Bakha izinqaba eziqinile zokuvikela lesi siqhingi, basiguqula saba isikhungo esibalulekile sokuphatha kanye nedolobha eliphakathi kwezizwe eziningi. Kwi-1523 Rhode yanqotshwa ama-Ottoman Turks. Ngesikhathi sokuhlalwa kwabakwa-Ottoman, kwakhiwa izakhiwo ezintsha ngaphakathi kweDolobha Elidala, ikakhulukazi ama-mosque nezindawo zokugeza. Kwi-1912 Rhode kwathathwa amaNtaliyane. Ababusi abasha bahlobisa lo muzi ngezakhiwo ezinhle kakhulu, imigwaqo ebanzi nezigcawu. Isigodlo sikaMnumzane omkhulu sakhiwa kabusha futhi uMgwaqo wama Knights waphinde wakhiwa kabusha ukuze kubuye kube nokuhlanzeka kwangaphambilini. Kwakungesikhathi kuze kube yi1948 lapho iRhodes yaba yingxenye yayo ngokusemthethweni Greece.
Ngokomlando, iRhode yayidume umhlaba wonke ngeColossus yaseRhodes eyodwa yezimangaliso eziyisikhombisa zomhlaba wasendulo. Lesi sithombe esikhulu sobhedu sikankulunkulu welanga wamaGrikhi uHelios sabhalwa njengasesikhumbeni semikhumbi. Kwaqedwa ngo-280 BC futhi kwabhujiswa kuzamazama komhlaba e-224 BC. Akukho mfanekiso wesithombe osasele namuhla.
IRhodes manje isiza samagugu emhlabeni.
Idolobha Elidala lingenye yamadolobha amakhulu ezikhathi zasendulo eYurophu.
Kungumfanekiso wamasiko ahlukene nempucuko; akuvamile ukuba isivakashi sibe nethuba lokuhamba ngaphakathi kwezindonga zangenkathi siphinde sihlolisise umlando wamakhulu amabili namashumi amane omlando. Izakhiwo ezihehayo zenqaba zangezikhathi zasendulo, imigwaqo, izindonga, amasango, izinsika eziwumngcingo, ama-minarets, izindlu ezindala, imithombo, ukuthula nokuzikhethela okumatasa kwenza kube sengathi usubuyela ezikhathini zangezikhathi zakudala. Isigodlo seNkosi eNkulu siyisigcino seDolobha Elidala. Isigodlo, okwakuyinqaba yaseByzantine eyakhiwa ngasekupheleni kwekhulu le-7th AD, siguqulwe ekuqaleni kwekhulu le-14th yi-Knights yaba yindawo yokuhlala yoMnumzane Omkhulu wama-oda kanye nendlunkulu yokuphatha yezwe labo; manje isiphendulwe imnyuziyamu.
Umgwaqo oboshwe ngamatshe we-Knights of the Knights, ongomunye wemigwaqo yangezikhathi zasendulo egcinwe kahle egcwele eYurophu, ugcwele izingwe zasendulo ezazisetshenziswa ukudlala amasosha e-Order of the Knights. Ekupheleni komgwaqo, eMnyuziyamu Museum, kuneSibhedlela seKnights, esihlala eMnyuziyamu we-Archaeological. Ngaphesheya kwesikwele kuneSonto leNkosikazi Yethu Yenqaba, i-Orthodox Cathedral yaseRhode ezikhathini zaseByzantine ezaba yiKhatholika lama Katolika ngenkathi amaKnights ethatha idolobha. Manje isingatha iMyuziyam yaseByzantine.
Cishe kukhona amathofi amaningi angaphandle, izindawo zokudlela nezitolo. I-Mosque kaSuleiman uMgabadeli ibheke ethekwini. Kufanele futhi ubone "isifunda saseTurkey", lapho uzothola khona uMustafa Pasha Mosque kanye ne-16th century "Yeni Hammam" (Amabhati waseTurkey).
Ngaphandle kwezindonga zeDolobha Elidala kunedolobha “elisha”, elinemakhiwo yalo ebabazekayo yaseVenetian, neoclassic kanye nesimanje. Phakathi kwezakhiwo eziphawuleka kakhulu ezigcina izinkumbulo zesikhathi sesiqhingi sase-Italiya ziphila yiPosi, iSifunda Sededecanese, I-Evangelismos Church (ISonto Lokumenyezelwa), Idolobha Ihholo Nezindawo Zezemidlalo Zezwe.
Imarina encane enezithombe zezinyamazane zaseRhodian ekungeneni kwayo kanye nama-windmill aseduze kuyinto engafanele iphuthelwe. Isimo seRhode sobuntu obunamasiko amaningi siyabonakala nakule ngxenye yedolobha, ngoba eduze nePhalamende kumi iMassat Reis Mosque nge-minaret yayo enhle.
Jabulela ilanga nolwandle endaweni esenyakatho yedolobha laseRhodes, elikleliswe ngamahhotela wanamuhla. Lapha uzothola neGrande Albergo delle Rose enomlando eyenziwe kabusha, esebenza namuhla njengeKhasino. Ukuvakashela e-Aquarium, esinye sezikhungo ezibaluleke kakhulu zocwaningo lwasolwandle phakathi Greece, kumele. E-aquarium engaphansi komhlaba, ekhumbuza isigodi esingaphansi kwamanzi, isivakashi singabona izinhlobo eziningi zezilwane ezihlala e-Aegean.
Ngakolunye uhlangothi lomuzi ungavakashela iRodíni Park, ipharadesi langempela elinamapogogo amaningi, imifudlana nemikhondo phakathi kwezihlahla ze-oleander, ikypypress, imephu yamapulangwe nezihlahla zikaphayini. ISanta Stefanos Hill (eyaziwa njengoMonte Smith) imaka indawo ye-Acropolis, okuyisikhungo esibaluleke kakhulu sokukhulekelwa, imfundo nokuzilibazisa ngezikhathi zakudala eRhode. Esiqongweni segquma uzothola izinsalela zeThempeli lika-Apollo, inkundla yezemidlalo yamaHellenistic kanye nendawo yokuzivocavoca.
Njengoba uphokophele ogwini olusempumalanga, okuhehayo kakhulu ngamabhati aseRoma - isibonelo esiyingqayizivele se-Orientalised Art Deco kusuka e1929 - kanye nolwandle olude olunesihlabathi saseFaliráki.
Ukugibela kuluhlaza okucwengekile kwezihlahla zikaphayini nezikopopo, emithambekeni yeFilérimos (okusho ukuthi “umthandi wedwa”) INtaba imele iSigodlo seNcasakazi uMariya namanxiwa e-acropolis yasendulo. Ezikhathini zaseByzantine, kwakukhona inqaba egqumeni okwathi, ngekhulu le-13th, yaba yisigodlo sezindela esinikezelwe ku-Holy Mary. Iphinde yabuyiselwa emuva kwesikhathi esihle ngabaseNtaliyane nabaseBrithani. Ngqo phambi kwesonto kunamanxiwa emathempeli ekhulu le-3rd lamaZeus no-Athena. Izivakashi zingahamba nge “Via Crucis”, okuholela ekubethelweni okukhulu. Ukubuka ukusuka lapho ngaphesheya kwe-Ialissós Bay kuyamangaza. Ikhanyisiwe ebusuku, isiphambano sibonakala kahle.
Ungadlala ngisho igalofu enkundleni yanamuhla ye-18-hole golf (eduzane nasebhishi lase-Afándou) elivulekile unyaka wonke futhi lihehe abathanda igalofu abavela kuwo wonke umhlaba. Indawo yePetaloudes (okusho amaButterflies) ifaka phakathi amadolobhana aseKremastí, Paradísi naseTheológos. I-Kremastí, enye yezindawo ezinkulu kunazo zonke futhi ephila kunazo zonke kulesi siqhingi, idume ngomkhosi wayo omkhulu weNkosazana uMariya nge-15th Agasti, ngenkathi ugu lwaseKremastí luphelele ukukhipha umoya kitsurfing kanye nokuvunguza komoya. Kodwa-ke, okuhehayo futhi okuthandwa kakhulu esifundeni yi-Valley of Butterflies, indawo enenani eliyingqayizivele lokukhiqizwa uvemvane lwePanaxia Quadripunctaria. Yamisa ubuhle bokungenakuqhathaniswa ngohlaza olunemifino nemifudlana njengoba uhamba ngemigwaqo ebekeke ngobuhlakani. Okunye okufanele sikuvakashele esiGodini nguMnyuziyamu woMlando Wezemvelo.
Kufanele futhi uvakashele
Izinqaba zangezikhathi zakudala zase-Atáviros, eKritininia
I-14th century Monólithos,
Isimo sasendulo sedolobha laseLindos
Isigodlo samakhosi amakhulu
Kahal Shalom Synagogue esigabeni sobucwebe
ISt. Catherine Hospice
Imindeni eRhode imvamisa inemoto engaphezu kweyodwa, kanye nesithuthuthu. Ukutholakala kwamathrafikhi kuvamile ikakhulukazi ezinyangeni zasehlobo njengoba izimoto ezingaphezulu kokuphindwe kabili ngenkathi izindawo zokupaka izimoto ezisedolobheni nasezindaweni eziseduzane nedolobha elidala zinomkhawulo futhi azikwazi ukubhekana nesidingo. Ngaphezu kwalokho, lesi siqhingi sisebenzwa ngamatekisi e-450 namanye amabhasi akwa-200 asemabhizinisini omphakathi nawangasese anezela emithwalweni yethrafikhi.